မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: နင်းဖြတ်ပြီးတဲ့ လှေကားတစ်ထစ်
Posted by mabaydar at 4:08 AM
မွေးနေ့မှာ လုပ်ချင်တာတွေလုပ် ၀ယ်ချင်တာတွေဝယ်နိုင်တာကိုက မင်္ဂလာတပါးပါ.. နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ခုလိုပဲ ပျော်ရွှင်တဲ့မွေးနေ့လေးများစွာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်ပါစေနော်.. :)
2/08/2011 7:43 AM
ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ့်စံနဲ့ပဲတိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်လေးကို သဘောကျတယ်။ အဲ့လိုစဉ်းစားပြီး နေရတာမှ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
2/08/2011 10:51 AM
ဟုတ်တယ် လူတွေနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် အရည်မရ အဖတ်မရတွေ ပြောဆိုဆက်ဆံနေရမယ့်အစား အခန်းအောင်းပြီးပဲ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပစ်လိုက်တယ်။
scrap book လေး လိုချင်လိုက်တာ။ အားကျတယ်။ မွေးနေ့မှာ တကယ့်လိုအပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲ အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်ခဲ့၊ လိုချင်တာတွေ ဝယ်ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပေးသွားပါတယ်။
သီချင်းဆိုတာတွေကြည့်ပြီး တော်တော်ပြုံးမိတယ်။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းနေကြရောပဲ .. Bravo~! Those are happy moments of da real life~!း)))
မဗေဒါရဲ့ အရေးအသားတွေကို သဘောကျပါတယ် keep it up ....
2/08/2011 3:16 PM
စာအရှည်ကြီးကို အားရပါးရ ဖတ်သွားပါတယ်..
နောက်ကျပေမဲ့ နောက်မကျဘူး ထင်ပါတယ်နော်..
Happy Birthday ပါ မဗေဒါး)
Happy Belated Bday Sis..
I am your silent blog reader, like your writing style.. Waiting for your short stories..
Scrap Book ကို သဘောကျလို့ နောက်တစ်ခါ ပြန်လာငေးနေတယ်။
အရမ်းမိုက်တာပဲ.. အပင်ပန်းခံပြီး လှလှပပလေး လုပ်ပေးမယ့်လူရှိတာ မဗေဒါ သိပ်ကံကောင်းတာပဲ။
ရုံးမှာတည်တည်မှုန်မှုန်မျက်နှာနဲ့ဖတ်နေတဲ့ပိုစ့် အောက်ဆုံးနားရောက်မှ ထအော်ရီမိတယ်..
ိသိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဘဲ action အပြည့်နဲ့သီချင်းဆိုနေကြတာ..
မွေးနေ့မှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်ရတာလောက် စိတ်ချမ်းမြေ့တာမရှိတော့ဘူး...
If i want to buy from Gmarket how long u need to wait? Pls write for me how to put eyeshadow? I saw all of yr photo u r very familiar to put makeup. Thanks advance
3/03/2011 8:37 AM
Depend on seller... The seller indicate there how many days it take for the shipping... for this eyeshadow, it take4days...
I also not master in applying make up. I learn through youtube make up tutorial.
3/04/2011 12:42 AM
မမတို့လုပ်မှပဲလွမ်းမိုး သီချင်းလေးတွေပျက်ပါပြီဗျာ .... :) စတာနော် ချိတ်ချိုးနဲ့
3/04/2011 2:22 AM
မဘေဒါရေ လာလည်သွားတယ်နော်။ ဘေဒါလမ်းဆိုတဲ့ ကဗျာလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းကကြိုက်တယ်လေ။ အဲဒိနာမည်လေးဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ ဆိုဒ်ကလေးလှပါတယ်။ အေးချမ်းပါစေ။ စေတနာပန်းခင်းက လာလည်သွားပါတယ်။ http://saytanarpankhinn.blogspot.com/
3/13/2011 11:39 AM